Ndakasvirwa naPastor ndikabva ndayita born Again - Nhau Dzevakuru
Kusvirwa na pastor ndayenda kuchurch kwavo, ndakabva ndayita born again.
Ndini hangu uyo, was invited to a church service ne one of my best friends, Sunday morning ndakamuka and started to get ready and ndayingonzwa zvakawanda about this church so i told myself let me give it a try.
Ndakageza hangu and ndikapfeka one of my sexy dress, my friend akawuya kuzonditora then takayenda kuchurch and it was nice wo zveshuwa because welcome yacho so I felt like i was home already. Ndakamhoresa vanhu vese and my friend introduced me kune ma church members ese but zvandakafarira more was the hunky pastor i saw maiweeeee ndakanzwa ropa rangu kumhanya muviri wese, even though mai mufundisi was next to pastor hazvina kuyita basa coz ndakabva ndatorwa moyo veduwe napastor.
Takapinda muchurch hedu tikagara pasi and service ikatanga it was good veduwe asi moyo wangu wanga ungori kuna pastor when he was preaching coz his voice was breath taking, pakasvika time yekuti vayenzi simukayi and introduce yourself then pastor came close to me and vakandibata mawoko veduwe ndakabva ndanzwa kuda kutosvirwa in church imomo coz hey mweya wekuda mufundisi wanga wandigara zvakayipa. Hameno pamwe idhimoni, asi kana ririro raitoda kusvirwa naPastor kwete kunamatirwa.
After service zvakanzi na pastor vanoda ma private prayers you can stay behind ndopandakabva ndaziva kuti now its my time to make a move and it was now or never, vanhu vese vakabuda vakabva vayenda and it seems kunge it was my lucky day and mwari vayive vanzwa chichemo changu, ndakasara ndega with pastor and takayenda alone in his study pavanoyita ma prayers and we started to talk, ndakabva ndawona kuti pastor ava also vayida zvema dress too much but izvozvo hazvina kunditadzisa zvandayida.
Tapedza kunamata hedu and we started to talk about life hedu and ndakabva ndayita first move and pastor said mwana iwe wakuda kundiyisa pamuyedzo shuwa asi hazvina kumbonditadzisa kuyita zvandayida mufunge coz my mind was made up already. Ndakavadya mboro pastor avo vakapa kutenda and he made his move, shuwa munongonzwa imi. Ndakavaratidza zvandayigona ndikavatambisira garo one baba vakanakidzwa ivavo kutokanganwa kuti tiri in church hedu and kuti ndipastor.
Now ndave kuyenda ku church every sunday and i’m born again veduwe coz my hunky pastor. Zvinotiunza kuChurch zvakasiyana siyana, inini ndakasangana nemboro yapastor ivo vakanakirwa nekudyiwa mboro neni.
Previous articleNdakafongoreswa naSolo achibva andisvirwa nyoro chaiyo
Next article#50MagateChallenge takes Zimbabwe by Storm – Videos